चैत्र २९ शुक्रवार
युके एफएम / धनराज श्रेस्ठ
सिन्धुलीको दुधौली न.पा. १४ को एक विध्यालयको ३ कोठे भवनको शुक्रवार उद्धघाटन गरिएको छ । श्रीजना आधारभुत विद्यालय रमिते दोबाटो दुधौली १४ को ३ कोठे भवनको शुक्रबार एक औपचारीक कार्यक्रमाका साथ उद्धघाटन गरिएको हो । दुधौली नगरका नगरप्रमुख घनश्याम राउतको प्रमुख आतिथ्यमा भवनको उद्धघाटन गरिएको उक्त विध्यालयले बताएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै नगरप्रमुखले भौतिक पक्ष मात्र नभै सम्पुर्ण शैक्षिक क्षेत्रलाई गुणस्तर शिक्षा प्रदानका लागि पहल गरिरहेको बताए ।
नेपाल सरकार राट्रिय पुर्णनिर्माण प्राधिकरण केन्दीय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ मार्फत जिल्लाआयोग कार्यन्वयन इकाई सिन्धुलीको तिन लाख ८९ हजार १ सय ९७ रुपियाँ ८० पैसाको लागतमा उक्त भवन निमाण सम्पन्न भएको श्रीजना आधारभुत विद्यालयका प्र.अ. हरिहर थापामगरले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा राट्रिय पुर्णनिर्माण प्राधिकरणका सब इजिनियर सुरेश साह दुधौली १४का वडा अध्यक्ष लिल बहादुर थापा मगर , दुधौली १४ प्रा.वि.आपटार चिउरिभञ्याङ्गका प्र.अ. तेज बहादुर माझी त्यसैगरि अन्य जनप्रति निधिहरुलगाएत सोही वडाका वडा वासिहरुको सहभागीता रहेको थिए ।